Wood Grain Mini Tena ilaina menaka Aroma diffuser China Manufacturer
Description:Mini Aroma diffuser,Fantsitran-tsolika menaka madinidinika,Fitrandrahana menaka Mini
Home > Products > Mini diffuser > Wood Grain Mini Tena ilaina menaka Aroma diffuser
Wood Grain Mini Tena ilaina menaka Aroma diffuser
Wood Grain diffuser dia manana jiro 14 mampitony. Misy jiro 7 misy hazavana mifanentana amin'ny tontolo isan-karazany. Ny loko tsirairay dia manana haingon-trano mamirapiratra roa (maivana sy marevaka) mba hotsidihina, ka dia hahazo loko 14 ianao hamoahana ny filanao samy hafa.
Fiarovana fiarovana sy fiara tsy manara-penitra. Safidy fitiliana telo: 1h / 3h / Mitohy. Ultrasonic Humidifier mitazona rano 80ml / 5oz ary maharitra 4 ora eo ho eo, izay ho simba rehefa tsy eo ny rano. Tsy manahy ny handoro.
Akanjo fanamboarana (Home diffuser). Ity fanamainty ity miaraka amin'ny famaranana varimbazaha vita amin'ny kitay dia mifanentana amin'ny haingo ao amin'ny biraonao na ao an-tranonao tsara, tokana mahafinaritra misy fofona (raha manisy menaka maromaro ao anatiny) dia mahatonga ny fiainanao ho tsara tarehy sy salama.
Tombontsoa bebe kokoa. Ity diffuser ultrasonic ity dia afaka manolotra fiantraikany fitsaboana amin'ny fitsaboana raha toa ka manampy menaka hafahafa manokana amin'ny rano ianao. Ny Mini diffuser dia manatsara ny hatezeranao amin'ny fiainana sambatra.
Mini Aroma diffuser Fantsitran-tsolika menaka madinidinika Fitrandrahana menaka Mini